Moments Neshamwari 21
Pane imwe nzvimbo yekutaura kwevaya vanoti mweya yevanhu vakabva vakabva kune shiri kana mhuka?
Pane chimwe chikonzero chebvunzo, asi chirevo chose ndechechokwadi. Mweya yemunhu haidzokerazve mudenga kana shiri kunze kwekunge aya mazwi akashandiswa kuvanhu. Mushure mekufa kwemunhu, nheyo dzayo dzakange dzakaverengerwa dzichibva dzadzokera kuhumambo kana munzvimbo dzavainge vadhonzwa kuzovakwa kwemutumbi wemunhuwo. Kune zvikonzero zvakawanda pane izvo zvinonzi zvingaitwe kuti mweya wemunhu unogona kudzoka kuupenyu mumuviri wemhuka. Chikonzero chikuru chekutaura kwakadaro idhimoni netsika; asi tsika inowanzo chengetedza chokwadi chakadzama muchimiro chisina kujairika. Mashura ndiyo fomu yaive hwaro hwekuziva zvekare. Mumwe akabata mashura asingazive zvazvinoreva anotenda muchimiro, asi asina ruzivo. Avo avo munguva dzazvino vanotenda mutsika iyo mweya yevanhu inoberekazve mumhuka, vanonamatira kune mashura kana tsika nekuti ivo varasa ruzivo rwunovanzirwa chirevo chekunze uye chaiko. Chinangwa chekuverengera muviri uye kubereka patsva kwepfungwa mumiviri ndechekuti ichadzidze izvo zvinokwanisa kudzidziswa nehupenyu hwapasi. Chishandiso icho chinodzidza icho imhando yemunhu. Mushure mekunge yapfuura kubva kune imwe yemunhu parufu uye yave kuda kuberekwa patsva inozvivakira uye inopinda mune imwe mhuka yemunhu. Asi hazvipinde chero emhando dzemhuka. Izvo hazvipinde mumuviri wemhuka. Icho chikonzero ndechekuti iyo yakanyatsosimba fomu yemhuka haizopa mukana wekuenderera mberi nedzidzo yayo. Muviri wemhuka waingodzoreredza pfungwa. Iko kukanganisa kwehupenyu humwe hakuna kugona kugadziriswa nepfungwa mumuviri wemhuka kana zvaigoneka kuti pfungwa dzive mumuviri wemhuka, nekuti chipenga chechipfuwa nehuropi zvakatadza kupindurwa nekubata kwepfungwa dzemunhu. Chikamu chemunhu mukuvandudzika kweuropi chinodiwa kuti pfungwa dzibate fomu yemhuka yemunhu; uropi hwemhuka hachisi chinhu chakakodzera kuti pfungwa yemunhu ishande nayo. Dai zvaigoneka kuti pfungwa dzivezve mumunhu mhuka, pfungwa, nepo dzakadaro mumuviri, dzaisazoziva pachadzo sepfungwa mumuviri wemhuka. Iko kudzikiswa kwepfungwa kwakadaro mumuviri wemhuka kunenge kusine chinangwa, sezvo pasina kukanganisa kungagadziriswa uye nekuregererwa. Kukanganisa kunogona kururamisa, zvisizvo zvakarongedzwa uye zvidzidzo zvinodzidziswa chete nezivo inowanikwa chete apo pfungwa dziri mumuviri wemunhu, uye dzinogona kubata nehuropi iyo ichatora painobata. Naizvozvo hazvina musoro kufunga kuti chero chinhu chingaitwe nemutemo kuti pfungwa yakabata kuburikidza nechimiro chemunhu inofanira kupinda mumuviri chero yemhando dzemhuka.
Zvikanzi mukati iyo Runyorwa pane Mufungo, Izwi, Vol. 2, Kwete. 3, Zvita, 1905, kuti: "Munhu anofunga uye zvakasikwa zvinopindura nekushamisa pfungwa dzake muchimiro chichienderera iye achitarisa achitarisa nekushamisika akatarisa kusaziva kwechikonzero. . . .Man anofunga uye anobatanidza zvisikwa nemafungiro ake, uye zvisikwa zvinounza chibereko chake muzvinhu zvese zvakasikwa sevana vepfungwa dzake. Miti, maruva, zvikara, zvinokambaira, shiri, zviri mumafomu avo kuchema kweyepfungwa dzake, nepo mune imwe neimwe yemamiriro avo akasiyana kuratidzwa uye hunyanzvi hweimwe yezvido zvake. Zvisikwa zvinobereka zvinoenderana nemhando yakapihwa, asi pfungwa yemunhu ndiyo inosarudza mhando uye mhando yacho inochinja chete nemafungiro ake. . . .Izvinhu zvinosangana nehupenyu mumiviri yemhuka zvinofanirwa kuve nehunhu hwadzo uye chimiro chakatemwa nemafungiro emunhu kusvikira ivo pachavo vachigona kufunga. Ipapo havachazodi rubatsiro rwake, asi vovaka mafomu avo sekufunga kwemunhu zvino kuvaka kwavo uye kwavo. ”Unogona here kutsanangura zvizere kuti pfungwa dzakasiyana dzemunhu dzinoita sei pazvinhu zvepanyika zvekuti kugadzira mhando dzakasiyana dzemhuka dzakadai seshumba, fani, pikoko, rattlesnake?
Kuti upindure mubvunzo uyu zvaizodikanwa kunyora chinyorwa senge chinyorwa cheIzwi. Izvi hazvigone kuitwa munzvimbo yakapihwa Moments neFamily, uye inofanira kusiiwa kudhipatimendi rekunyora remagazini ino. Tichaedza, zvisinei, kuratidza nhungamiro iyo yakataurwa nekwenyorwa pamusoro yapedzwa.
Pakati pezvisikwa zvese zvipenyu munhu ndiye chete aripo ane hunyanzvi hwekugadzira (sekusiyaniswa kubva mukubereka.) Iyo yekusika fosi isimba rake remafungiro uye rekuda. Mufungo ndicho chigadzirwa chechiito chendangariro uye chishuwo. Kana pfungwa dzichiita pane chishuwo pfungwa inogadzirwa uye pfungwa inotora chimiro chayo mune zvehupenyu hwenyika. Iyi nyaya yehupenyu iri mundege yepamusoro-yepanyama. Pfungwa dzinotora chimiro dzirimo mune yepamusoro-muviri chimiro pane iyo ndege yekufunga. Chishuvo sechinhu chakasikwa chakaitwa nepfungwa dzemunhu kunobereka pfungwa zvinoenderana nechimiro chendangariro nechido. Idzi pfungwa dzinoenderana nechimiro chepfungwa nechido. Idzi pfungwa padzinogadzirwa ndidzo mhando dzemafomu anoonekwa mupasirese, uye aya mafomu anoratidzwa nemamwe masangano kana zvikamu zvehupenyu izvo zvisingakwanise kuzvenzela mafomu.
Munhu ane mukati make chimiro chechipenyu chose chiri munyika. Imwe neimwe mhuka yemhando kana mhando inomiririra chishuwo chakati uye chinofanira kuwanikwa muvanhu. Asi kunyangwe zviumbwa zvese zvemhuka zviri mumunhu, iye, ndiye mufananidzo wake, ari munhu, uye mhuka dziri maari dzinoonekwa panguva dzakadai seanobvumira zvishuwo uye zvishuvo kutora uye kuratidza chimiro chavo kubudikidza naye. Zvakaita sekunge zvisikwa zvese zvemhuka zvaive zvemakonzo mazhinji akasunganidzwa pamwe nekukuvadzwa mukati memuviri wake uye ndiye mhuka yemusiki yezvisikwa zvese zvemhuka. Tarisa kumeso kwemurume kana abatwa neparoxysm yekukasira, uye chimiro cheye mhuka chinotungamira chinonyatsoonekwa maari. Bere rinotarisa kunze kwechiso chake uye rinogona kuvonekwa nenzira yake. Nyati inoburitsira kwaari senge ichamhanyisa mhuka yayo. Nyoka inodonha kuburikidza nekutaura kwayo uye inotsvedza kuburikidza nemeso ake. Shumba inoomba sekutsamwa kana kuchiva inoshanda nemuviri wake. Chero chipi zvacho cheizvi chinopa nzvimbo kune icho chinopfuura nemuviri wake, uye iko kuratidzwa kwechiso chake kunochinja nyangwe mhando. Ndipo apo munhu paanofunga muchimiro cherwonzi kana mhumhi kana fox kuti anogadzira iyo pfungwa yenyati, mhumhi, kana fox, uye fungidziro inorarama muhupenyu hwenyika kudzamara yakweverwa mune yepasi dzepfungwa nyika kupa chimiro kune iyo masangano anouya aripo kuburikidza kubereka. Dzese mhando dzakasiyana dzemhuka dzinopfuura nenzira uye dzinopihwa kutaura kumeso kwemunhu sezvo mifananidzo yaifambiswa kuseri kwechidzitiro. Nekudaro, hazviiti kuti mhumhi itaridzike senzizi kana mbichana senge tiger kana imwe yeaya senyoka. Imwe neimwe mhuka inoita zvinoenderana nemhando yayo uye haina kumbobvira yakaita chero rumwe rudzi rwemhuka pane iyo pachayo. Izvi zvinodaro nekuti, sezvakataurwa mukutaurwa, uye zvichazoratidzwa mumashure, mhuka imwe neimwe inyanzvi, irwo rudzi rwechido mumurume. Mufungo ndiye musiki wemhando dzese dziri munyika, uye munhu ndiye ega mhuka inofunga. Iye anomira ane hukama nenyika yepasi saMwari, iye musiki, anonzi ane hukama nemunhu. Asi pane imwezve nzira iyo munhu ari kukonzera kuoneka kwemhuka munyama. Izvi zvichatsanangurawo chimwe chezvirevo zvakawanda uye chikonzero chechirevo chemavara magwaro kuti munhu anogona kubereka patsva kana kutapira mukati memiviri yemhuka. Izvi ndoizvi: Pakati pehupenyu chishuwo chiri mumunhu chinhu chakawanda chemhuka, chisina fomu chaiyo. Munguva yehupenyu hwemunhu, chishuwo maari chinogara chichinja, uye hapana mhando chaiyo yemhuka inoramba iri muuchapupu zvakareba naye. Mhumhi inoteverwa nehuku, mbizi nebere, bere nembudzi, mbudzi negwai uye zvichingodaro, kana chero zvakarongeka, uye izvi zvinopfuurira kazhinji kuburikidza nehupenyu kunze kwekunge paine hunhu hunotaurwa mumurume imwe yemhuka zhinji inodzvinyirira imwe muchimiro chake uye igwai kana mbizi kana mhumhi kana kubereka hupenyu hwake hwese. Asi mune chero mamiriro ezvinhu, parufu, chishuwo chinoshanduka chechimiro chake chakaiswa mune imwechete yakajeka mhando yemhuka iyo inogona kunge ichine yenguva iyo fomu yemunhu astral. Mushure mekunge pfungwa dzaenda kubva kumhuka yayo, mhuka yacho zvishoma nezvishoma inoburitsa kunze kudzora kwemunhu uye inotora yemhando yayo chaiyo yemhuka. Iyi mhuka ipapo chisikwa chisina chisaruro chevanhu.